Meksika: Fanamelohana Ny Famonoan’olona Tao Cadereyta, Ao Nuevo León · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2012 4:56 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Français, Español
Nifoha tamin'ny torimasony indray i Meksika noho ny vokatry ny ady niseho tamin'ny 13 Mey lasa teo, noho ny ady atrehin'ny governemanta ankehitriny ho fanoherana ny heloka novolavolaina mialoha. Tao amin'ny tanin'ny kaominina ao Cadereyta Jiménez ao amin'ny faritanin'i Nuevo León, avaratra-atsinanan'i Meksika, 400 km miala amin'ny sisintanin'i Etazonia, no nitrangan'ny ady. Fatin'olona miisa 49 norasarasaina no hita tao amin'ny lalana Reynosa (Tamaulipas). Ignacio de los Reyes ao amin'ny onjam-peo BBC nanazava ny amin'ireo fatiolona :
Natsipy manerana ny lalana tao Nuevo León ny vata mangatsiakan'ireo olona 49 izay notapahina ny lohany, norasarasaina ny vatany, tamin'ny alahady lasa teo, nihorohoro tanteraka ny maro manoloana ny herisetra tafahoatra ataon'ireo mpamono olona. Na dia tao Meksika aza, nilaza fa efa nahita tranga toy izany, tao anatin'izay dimy taona nisian'ny ady mafonja teo amin'ireo samy andian-jiolahy mpifanandrina. Araka ny filazan'ny governemanta ao Nuevo León, notapahina tamin'ny vatan'ireo olona namoy ny ainy tao Cadereyta: ny lohany, ny tanany ary indrindra ny tongony. Nilaza ny mpitondra tenin'ny governemanta fa tsy nahitana dianà ratra na bala tamin'ireo olona, izay mahatonga ny maro hihevitra fa nampijaliana sy norasarasaina velona izy ireo.
Carlos Puig, mpanao gazety, mampahatsiahy antsika fa tsy tranga-javatra miavaka izao, fa efa matetika no misy ny tranga feno herisetra mitovy izao manerana ny firenena :
Mitohy hatrany ny famonoana olona : ireo notapahin-doha tao Nuevo Laredo, faty niparitaka tao Jalisco ary nitohy tao Tamaulipas ihany koa izany horohoro izany…
Manohy ny asa ratsiny ireo jiolahy, kanefa tsy mahavaha olana ny tompon'andraikitra no tsy mahafantatra izay paikady ampiasain'ireo jiolahy. Mitohy hatrany ny vono olona manerana ny tanàna ao amin'ny firenena satria manome vahana ny famonoana olona ihany koa ny tsy fisaziana.
Araka ny hevitr'ity mpanao gazety ity, anisan'ny lohahevitra horesahina mandritra ny fanatontosana ny fifidianana izany, ka tokony hampandroso soso-kevitra mivaingana sy azo tanterahina ho entina hamahana ny olan'ny tsy fandriampahalemana mianjady ao amin'ny firenena ireo kandidà mpifanina amin'ny fifidianana.
Talohan'ny zava-nitranga tamin'ny 13 mey tao Nuevo León, nampahonena tokoa ny nahita fa tsy mba nanana tolo-kevitra ireo kandidà hoentina hiatrehana ny herisetra. Toa tsy manan-kery izy ireo manoloana ny toe-javatra mampihorohoro tahaka izao.
"Aok'izay ny herisetra". Avy amin'i Gerardo Obieta, @G_Obieta,nahazoana alalana ny fampiasana ny sary, Licence Creative Commons2.0 Generic (CC BY 2.0)
Tao amin'ny Twitter, nanameloka izao toe-javatra izao avokoa ny olom-pirenena samihafa fiaviana. Nisy ireo niantso ny filoha Calderón handray ny andraikiny, araka ity nosoratan'i Alessia Corcuera ity:
(@top_roping_ale): faty olona 49 norasarasaina tao #Caderaheyta. Resaka matotra, mahita ve ianao fa mandeha tsara ny fiainam-pirenena @FelipeCalderon? Mbola sahinao ve ny hiteny fa resaka fijery fotsiny izany!
Tahaka izany ihany koa, Alberto Esteva (@AlbertoEsteva) nampifandray izany fanamarihana izany sy ny politika momba ny fiarovana izay napetraky ny filoha ankehitriny:
Mampiseho mivandravandra ny tsy fahalavorarian'ny politikan'ny fiarovan’ i Calderón ny fisian'ireo faty olona 49 tao Cadereyta , ho famaliana ny kabary mampandry andrisa nataony…
Tao amin'ny twitter ihany, José Plata (@pepeplata) nitantara ny loza niseho tao Cadereyta :
vatana 49 norasarasaina tao #Cadereyta: vehivavy 6 ary lehilahy 43 … Mbola mikatona foana ny lalana mankany. Loza mahatsiravina tanteraka ny zava-niseho tao Nuevo León #Nl.
Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda), mpandalina momba ny politika, sy kandidà teo loha tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, nanambara fa mbola misy ny ady anatiny ao Meksika noho izany loza nitranga izany :
Ireo faty 49 norasarasaina tao Cadereyta no manaporofo fa 5 volana hiafaran'ny fitondran'i Calderón, mbola tsy tapitra na resy ny tolony (ny firotsahan'ny hofidiana filoham-pirenena), rahoviana vao ho tapa-kevitra isika?
Araka ny hevitr'ilay mpanao gazety, Julio Hernández (@julioastillero), nampahafantatra ny fihetseham-pon'ireo Meksikana manoloana izao karazan-java-miseho izao :
Faty olona 49 na 68 (araka ny loharanom-baovao) tao Cadereyta, tsy maninona na firy na firy, satria toa tsy mivaky loha firy amin'izany karazam-baovao izany ireo Meksikana an-tapitrisany.
Vanin-tantara maherisetra indrindra ny famonoana olona tao Cadereyta, vavolombelona nahita maso ity ny fandehan'ny ady ho fanoherana ny heloka ketrehana ireo Meksikana, toa mbola ho ela anefa vao hifarana izany ady izany.